Eng to Myanmar dictionary in phone- စာမျက်နှာ3— MYSTERY ZILLION
Eng to Myanmar dictionary in phone
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်ကတော့ မရှိဘူးဗျ. မြန်မာလိုရိုက်တဲ့ application လေးတော့ ပေးလိုက်တယ်။ ဒေါင်းကြည့်လိုက်ပါဦး။ လင့်ခ်အတွက် အဆင်မပြေရင်လည်းပြောပါ။
အီး ... ဖိုင်အရှိတော့ဘူးတဲ့ :2:
pyaephyoe wrote: »
သူ့ရဲ့ official site မှာပဲသွားဒေါင်းလိုက်ပါ ။
nokia N97 မှာကောသုံးလိုရလားဟင်။
can I install this dictiomary on my n73.
အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်ကတော့ မန်ဘာအသစ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓါန်လေးရချင်နေတာကြာပါပြီ။ ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းတွေလည်း အားရမှုရှိပါတယ်။ ပညာတော်တော်ရပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ Blackberry user ပါ။ ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ Blackberry ဖုန်း နဲ့ပါတ်သက်တာပါလာမလားလို့ ဖတ်လာတာ မပါလို့ ဒီစာရေးလိုက်တာပါ။ Blackberry ဖုန်းတွေမှာ သုံးလို့ရလားပါသလား။ ကျနော့် စမ်းတာတော့ မရပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။